Mmega ahụ́: Gịnị Kwesịrị Ime Ka M Na-emega Ahụ́? | Ndị Na-eto Eto
Baịbụl kwuru na ‘ọzụzụ nke ahụ́ bara uru.’ (1 Timoti 4:8) Ma, ọtụtụ ndị na-eto eto na-ekwu na ha ga na-emega ahụ́, ma ime ya eme na-ara ha ahụ́.
Obinna, bụ́ onye dị afọ iri abụọ na otu, kwuru, sị: “Mgbe m nọ n’ụlọ akwụkwọ sekọndrị, mmega ahụ́ so n’ule ndị anyị na-ele. Ma, ọtụtụ ụmụ akwụkwọ anyị na-ada ya. Amaghị m ihe mere ha ji ada ya, ebe ọ bụkwanụ na mmega ahụ́ dị mfe ka iri nri.”
Adamma, bụ́ onye dị afọ iri abụọ na abụọ, kwuru ihe mere na ụfọdụ ndị anaghị emega ahụ́. Ọ sị na ha achọghị ịna-agbagharị n’èzí mgbe anwụ na-acha, n’ihi na ọ ga-eme ka ọsụsọ na-agba ha, ike agwụkwa ha. Ha na-ekwu na ọ kaara ha mma ịnọ n’ime ụlọ na-egwu egwuregwu vidio n’ihi na ọ na-adị ha ka ọ̀ bụ ezigbote egwuregwu?
Ọ̀ na-abụ e kwute okwu “imega ahụ́,” ike agwụ gị? Ọ bụrụ otú ahụ, lee uru atọ ị ga-erite ma ị na-emega ahụ́.
Uru nke mbụ. Imega ahụ́ na-eme ka ị ghara ịna-arịakarị ọrịa. Ulumma, bụ́ onye dị afọ iri na itoolu, sịrị: “Papa m na-agwakarị anyị na ọ bụrụ na anyị anaghị ewepụta oge na-emega ahụ́, anyị na-akpọ ọrịa òkù.”
Uru nke abụọ. Imega ahụ́ na-eme ka ahụ́ ruo gị ala. Ijeoma, onye dị afọ iri na isii, sịrị: “Mgbe ọ bụla m na-echegbu onwe m, m na-aga gbaa ọsọ. Nke a na-eme ka ahụ́ ruo m ala. Ọ na-emekwa ka ahụ́ na-adị m mma, obi ana-adịkwa m ụtọ.”
Uru nke atọ. Imega ahụ́ na-eme ka obi na-adịkwu mmadụ ụtọ. Adamma sịrị: “M na-anọkarị n’èzí emega ahụ. Ụdị mmega ahụ́ ndị na-amasịkarị m bụ ịga ije, igwu mmiri, na ịgba ígwè.”
Ihe Ga-enyere Gị Aka: Wepụta ụbọchị atọ ị ga-eji na-emega ahụ́ n’izu ọ bụla. Hụkwa na i ji ma ọ́ dịghị ihe ọzọ nkeji iri abụọ na-emega ahụ́ n’ụbọchị nke ọ bụla. Gbalịakwa na-eme ụdị mmega ahụ́ ga-eme ka ọsụsọ gbaa gị.
Ihe Ị Ga-eburu n’Uche: N’agbanyeghị na otú ahụ́ gị dị nwere ike isi gị n’ọbara, ọ bụ otú i kpebiri isi na-ebi ndụ gị ga-akacha mee ka ahụ́ dị gị mma ma ọ bụ ghara ịdị gị mma. N’ihi ya, ọ bụ gịnwa ga-ekpebi ma ị̀ ga-emega ahụ́ ma ọ bụkwanụ na ị gaghị emega.